देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्ने ?
2021-09-04 05-09 Hamro Biratnagar
काठमाडौं, १९ भदौ : एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० सम्झौता गरेका व्यक्तिहरु नै अहिले बोल्न डराएको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा ओलीले एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनको धारणा मागे । ‘यिनै मान्छेहरु हुन् कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसिसी गरे । अहिले एमसिसीमा बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोज्या छ । के गर्ने हो भन्दैनन् । जनताका अगाडि यिनीहरुले गरेको एमसीसी के गर्ने रु देउवाजी, प्रचण्डजी बोल्नुपर्दैन । के गर्ने एमसीसी रु उहाँहरु चुपचाप हुनुहुन्छ। यस्ता अनगिन्ती कुराहरु गोप्य राखेर नेपाली जनतालाई छक्याएर अघि बढ्न खोजेका छन्,’ उनले भने ।
ओलीले सुकुम्वासी आयोग खारेज र आफूले सुरु गरेका योजना रोक्ने सरकारको निर्णयको पनि आलोचना गरे । ‘पहिला गरिबमाथि बञ्चरो प्रहार गरेर सुरु गर्‍यो । त्यसपछि विकास निर्माणका काम एकपछि अर्को भत्काउन थाल्यो,’ उनले भने ।
ओलीले वर्तमान सरकारले धराहरा पनि भत्काउन सक्ने भन्दै चनाखो हुन आह्वान गरे । ‘तपाईहरु नहुने हो भने भक्तपुरमा एकपटक राति क्रेन लगेर मूर्तिको घाँटी मर्काएजस्तै धरहराको पनि क्रेन ल्याएर यिनीहरुले घाँटी मर्काउँछन् । देख्न नसकेर, विकास निर्माण यसरी गर्ने हो, धरहरा यसरी बनाउने हो भनेर मर्काउन सक्छन्,’ ओलीले भने, ‘रानीपोखरीमा ढुंगा हान्न सक्छन् । मूर्ति भक्काउन सक्छन् । याद गर्नुस् यिनीहहरुले कुनै रचनात्मक काम गर्न सक्दैनन् । बिगार्दै गएका छन् ।’
वर्तमान सरकारले विकासको गतिलाई रोकेर कर्मचारीतन्त्रमा आतंक फैलाएको ओलीको आरोप थियो । ‘कर्मचारी कसैलाई निकालेको छ, स्पष्टीकरण सोधेको छ । कसैलाई सुख नदिने,’ ओलीले सोधे, ‘कर्मचारी, जनता, सुकुम्वासी, गरिबलाई सबैलाई दुःख दिएका छन् ।
« थप एक हजार २६८ मा सङ्क्रमण, ९ जनाको निधन
प्रदेश १ मा ३०५ संक्रमित थपिए, कुन पालिकामा कति ? »